Atherosclerosis (သွေးကြောကျဉ်းခြင်း) - Hello Sayarwon
Dr. Hlaing Min Ko Ko မှ ရေးသားသည်။4ရက် အကြာက တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
သွေးကြောကျဉ်းခြင်း သည် သွေးလွှတ်ကြောများအတွင်း အဆီချပ်ပြားများ စုပုံလာသော ရောဂါဖြစ်သည်။ သွေးလွှတ်ကြောများသည် အောက်စီဂျင်ပါသည့် သွေးများကို သယ်ပေးသော သွေးကြောများဖြစ်သည်။
ချပ်ပြားများကို အဆီများ၊ ကိုလက်စထရောများ၊ ကယ်လ်စီယမ်နှင့် သွေးထဲတွင်တွေ့ရသော တခြားအရာများနှင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့် ချပ်ပြားများသည် မာကြောလာကာ သွေးလွှတ်ကြောများကို ကျဉ်းသွားစေသည်။ ထိုအခါ အောက်စီဂျင်ပါသောသွေးများ ကိုယ်အင်္ဂါများနှင့် တခြားအစိတ်အပိုင်းများသို့ သွေးစီးဆင်းမှုကို ဟန့်တားသွားစေနိုင်ပါသည်။
သွေးကြောကျဉ်းခြင်းသည် ပြင်းထန်သည့်ရောဂါများဖြစ်သော နှလုံးဖောက်ခြင်း၊ လေဖြတ်ခြင်း စသည်တို့ကို ဖြစ်စေနိုင်သလို အသက်ပါသေစေနိုင်ပါသည်။
Atherosclerosis (သွေးကြောကျဉ်းခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
သွေးကြောကျဉ်းခြင်းသည် အသက်ကြီးလာလေလေ အဖြစ်များလေလေ ဖြစ်သည်။ သင်အသက်ရလာသည်နှင့် သွေးကြောကျဉ်းခြင်းနိုင်ချေ ပိုများလာ၏။ မျိုးရိုးဗီဇနှင့် လူနေမှုပုံစံများကြောင့် အသက်ရလာသည်နှင့် သွေးလွှတ်ကြောများအတွင်း ချပ်ပြားများစုပုံမှုကို ဖြစ်လာစေနိုင်သည်။
အမျိုးသားများတွင် အသက် ၄၅ ကျော်ပါက ဖြစ်နိုင်ချေ တိုးလာ၏။ အမျိုးသမီးများတွင် အသက် ၅၅ ကျော် (သွေးဆုံးပြီးနောက်ပိုင်း)မှ ဖြစ်နိုင်ချေ တိုးလာပါသည်။
Atherosclerosis (သွေးကြောကျဉ်းခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
သွေးကြောကျဉ်းခြင်း ၏ ရောဂါလက္ခဏာများသည် ချက်ချင်းပေါ်လာသည်မဟုတ်။ ဖြည်းဖြည်းချင်း ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။
သွေးလွှတ်ကြော အတော်ကျဉ်း သို့မဟုတ် ပိတ်သွားပြီး လုံလောက်သည့် သွေးပမာဏကို တစ်ရှူးများအား မပို့ပေးနိုင်တော့မှသာ သွေးကြောကျဉ်းခြင်းလက္ခဏာများကို ခံစားရမည်ဖြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ သွေးခဲများဖြစ်ပေါ်ပြီး သွေးကြောများ လုံးဝပိတ်သွားခြင်းကြောင့် ရုတ်တရက် နှလုံးဖောက်ခြင်း သို့ လေဖြတ်ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။
သွေးကြောကျဉ်းခြင်းသည် မပြင်းထန်ဘူးဆိုရင် ဖြစ်နေသည့် သွေးကြောပေါ်တွင် မူတည်ပြီး အောက်ပါတို့ ဖြစ်ပွားနိုင်၏။
နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းပါက ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း သို့ ဖိထားသလိုဖြစ်ခြင်းတို့လို လက္ခဏာများကို ခံစားရနိုင်သည်။
ဦးနှောက်သို့သွားသည့် သွေးကြောများ ကျဉ်းနေလျှင် ခြေလက်များ၌ ရုတ်တရတ် ထုံခြင်း သို့မဟုတ် အားနည်းခြင်း၊ စကားပြောရခက်ခြင်း သို့ စကားဝါးခြင်း၊ အမြင်ဝါးခြင်း သို့မဟုတ် မျက်နှာကြွက်သာများ တွဲကျခြင်းတို့ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် လေဖြန်းခြင်းဖြစ်ပြီး မကုသပဲထားပါက လေဖြတ်သွားနိုင်ပါသည်။
လက်များခြေများရှိ သွေးကြောများ ကျဉ်းပါက လမ်းလျှောက်လျှင် ခြေသလုံးတောင့်ပြီး ခြေထောက်နာခြင်းမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ကျောက်ကပ်သွေးကြောများကျဉ်းပါက သွေးတိုးခြင်း သို့မဟုတ် ကျောက်ကပ်အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ခြင်းများ ဖြစ်စေနိုင်သည်။
စောလျင်စွာ သိရှိကုသခြင်းသည် သွေးကြောကျဉ်းခြင်းအား ပိုမဆိုးအောင်၊ နှလုံးဖောက်ခြင်း၊ လေဖြတ်ခြင်းနှင့် တခြားသော အရေးပေါ်အခြေအနေများမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဆရာဝန်နှင့် တတ်နိုင်သလောက်မြန်မြန် ဆွေးနွေးကာ ပြင်းထန်သည့်ရောဂါများကို ကာကွယ်ပါ။
Atherosclerosis (သွေးကြောကျဉ်းခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ကိုလက်စထရောကို ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းနှင့် သင်စားသောအစာများတွင် သဘာဝအတိုင်း တွေ့နိုင်ပါသည်။ ထိုပစ္စည်းသည် သွေးထဲတွင်များလာပါက သွေးကြောများကို ပိတ်ဆို့စေနိုင်၏။ ၎င်းမှ မာသောချပ်ပြားများဖြစ်လာပြီး နှလုံးနှင့်တခြားအင်္ဂါများသို့ သွေးလှည့်ပတ်မှုကို ပိတ်သွားစေနိုင်ပါသည်။
အဆီများသောအစာများသည် ချပ်ပြားများ ဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်ပါသည်။
အသက်ကြီးလာသည်နှင့် နှလုံးနှင့်သွေးကြောများသည် သွေးညှစ်ထုတ်ရန်နှင့် လက်ခံရန် ပိုခက်လာကြ၏။ သင်၏သွေးလွှတ်ကြောများသည် အားနည်းကာ ဆန့်နိုင်ကျုံ့နိုင်စွမ်းလည်း နည်းသွားပြီး ချပ်ပြားဖြစ်ပေါ်မှုကို ပိုဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
တခြားသောအဖြစ်များသည့် အကြောင်းရင်းများ –
အဝလွန်ခြင်း သို့ ဆီးချိုဖြစ်ခြင်း
အဆစ်ရောင်ခြင်း၊ ပိုးကူးစက်ခြင်း သို့မဟုတ် အကြောင်းရင်းမသိရသော ရောင်ရမ်းခြင်းရောဂါများ
Atherosclerosis (သွေးကြောကျဉ်းခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
သွေးကြောကျဉ်းခြင်း ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေသော အကြောင်းရင်းများစွာရှိပါသည်။ တချို့သောအချက်များကို ကာကွယ်နိုင်သော်လည်း တချို့ကိုတော့ ကာကွယ်မရနိုင်ပါ။
Atherosclerosis (သွေးကြောကျဉ်းခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
စမ်းသပ်ကြည့်ရှုစဉ်တွင် ဆရာဝန်မှ ကျဉ်းသော၊ ကျယ်သော၊ မာသော အောက်ပါ သွေးလွှတ်ကြောလက္ခဏာများကို ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
ကျဉ်းနေသောသွေးလွှတ်ကြောအောက်ဖက်တွင် သွေးခုန်နှုန်း ပျော့ပျော့သာစမ်းရခြင်း သို့မဟုတ် လုံးဝစမ်းမရခြင်း
သွေးလွှတ်ကြောပေါ်မှ နားကြပ်နှင့်နားထောင်လျှင် တဝူးဝူးမြည်နေခြင်း
စမ်းသပ်ကြည့်ရှု့မှုရလဒ်အပေါ်မူတည်ကာ ဆရာဝန်မှ ရောဂါအမည်တပ်နိုင်မည့်အောက်ပါ စစ်ဆေးမှုများကို ပြုလုပ်ခိုင်းပါလိမ့်မည်။
ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးခြင်းဖြင့် သွေးကြောကျဉ်းခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်မည့် ကိုလက်စ်ထရောနှင့် သကြားဓါတ် မြင့်တက်နေခြင်းကို သိရှိနိုင်ပါသည်။
အထူးပြုလုပ်ထားသော အယ်ထွာဆောင်းစက်အားသုံးကာ လက်နှင့် ခြေတစ်လျှောက် သွေးဖိအားကို တိုင်းတာခြင်းဖြင့် သွေးစီးဆင်းနှုန်းကို သိရှိနိုင်ပါသည်။
ခြေထောက်နှင့်လက်များတွင် သွေးကြောကျဉ်းခြင်းမှု ရှိနေကြောင်းကို ဒီစစ်ဆေးမှုမှ ပြောပြနိုင်ပါသည်။ ဆရာဝန်သည် သင့်ခြေကျင်းဝတ်မှ သွေးပေါင်ချိန်နှင့် လက်မောင်းသွေးပေါင်ချိန်ကို နှိုင်းယှဉ်ပါလိမ့်မည် ။ ၎င်းကို ankle-brachial index ဟုခေါ်သည်။
အီးစီဂျီတွင် အရင်က နှလုံးဖောက်ဖူးကြောင့် တွေ့ရနိုင်သည်။ သင်လှုပ်ရှားနေစဉ် လက္ခဏာများ ပေါ်လာသည်ဆိုပါက ဆရာဝန်သည် သင့်အား လမ်းလျှောက်စက်တွင် လျှောက်ခိုင်းပြီး သို့မဟုတ် စက်ဘီးနင်းစက်တွင် နင်းခိုင်းပြီးမှ အီးစီဂျီနှင့် စစ်ဆေးမည်ဖြစ်သည်။
ဖိစီးမှုပေးပြီးစမ်းသပ်ခြင်းသည် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားခိုင်းပြီး စစ်ဆေးကာ သင့်နှလုံးမှ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုအား ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း တုန့်ပြန်သလဲဆိုသည်ကို တွေ့ရှိရမည်ဖြစ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် လှုပ်ရှားလျှင် နှလုံးသည် သွေးပိုညှစ်ရပြီး ပိုမြန်မြန်ခုန်ရပါသည်။
ဖိစီးမှုပေးပြီးစမ်းသပ်ရာတွင် တခြားနည်းဖြင့် သတိမထားမိနိုင်သော နှလုံးပြဿနာများကို တွေ့ရှိရနိုင်ပါသည်။ ဖိစီးမှုပေးပြီးစစ်ဆေးခြင်းတွင် လမ်းလျှောက်စက်တွင် လမ်းလျှောက်နေစဉ် သို့မဟုတ် စက်ဘီးနင်းစက်တွင် နင်းနေစဉ် နှလုံးစည်းချက်၊ သွေးဖိအားနှင့် အသက်ရှူခြင်းတို့ကို စောင့်ကြည့်မည်ဖြစ်သည်။
ဒီစစ်ဆေးမှုတွင် နှလုံးသွေးကြောများ ကျဉ်းမကျဉ်း ပိတ်မပိတ်ကို သိရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဆိုးဆေးအရည်အား သွေးလွှတ်ကြော အထူးသဖြင့် ခြေထောက်ရှိသွေးလွှတ်ကြောမှ ပြွန်ကိုထည့်ကာ နှလုံးရောက်သည်အထိ ထိုးပါမည်။ ဆိုးဆေးများ သွေးလွှတ်ကြောများအတွင်းပျံ့သွားပါက ဓာတ်မှန်တွင် သွေးကြောများကိုမြင်လာနိုင်ပြီး ပိတ်နေသည့် ဧရိယာကို သိရှိနိုင်ပါသည်။
တီဗီဓာတ်မှန်၊ ကွန်ပျူတာဓါတ်မှန် သို့မဟုတ် သံလိုက်ဓါတ်မှန်များကိုသုံးပြီး သွေးကြောများကို လေ့လာနိုင်ပါသည်။ ထိုစစ်ဆေးမှုများသည် မာ၍ပိတ်နေသော သွေးကြောကြီးများ (ဥပမာ ဖောင်းနေသော သွေးလွှတ်ကြောများ)နှင့် ကယ်လ်စီယမ် အနည်များကို သွေးလွှတ်ကြောနံရံများတွင် တွေ့နိုင်ပါသည်။
Atherosclerosis (သွေးကြောကျဉ်းခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ဆေးများသည် သွေးကြောကျဉ်းခြင်းပိုဆိုးမလာစေရန် အကူအညီပေးပါသည်။ ထိုဆေးများမှာ-
-ကိုလက်စ်ထရောကျဆေးများဖြစ်သော စတက်တင်များနှင့် ဖိုက်ဘရစ်အက်စစ်ထွက်ဆေးများ၊ သွေးမွှားဥဆန့်ကျင်ဆေးများနှင့် သွေးမခဲဆေးများ ဥပမာ အက်စ်ပရင်တို့ကို သွေးမခဲစေရန် သွေးကြောများမပိတ်စို့စေရန် သုံးနိုင်ပါသည်။
-ဘီတာဘလော့ကာ သို့မဟုတ် ကယ်လ်စီယမ်ပြွန်ပိတ်ဆေးများက သွေးဖိအားကို ကျစေနိုင်သည်။
-ဆီးဆေးများသည်လည်း သွေးဖိအားကို ကျစေပါသည်။
-ACEIဆေးများက သွေးကြောကျဉ်းခြင်းကို ပိုမဆိုးအောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။
တချို့အခြေအနေများတွင် လက္ခဏာများအတော်ဆိုးခြင်း သို့မဟုတ် အသက်အန္တရာယ်ရှိလာနိုင်ပါက ခွဲစိတ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
လမ်းလွှဲသောခွဲစိတ်ခြင်း – ၎င်းတွင် ခန္ဓာကိုယ် တစ်နေရာမှသွေးကြော သို့မဟုတ် လူလုပ်ပြွန်နှင့် ပိတ်နေ ကျဉ်းနေသည့်နေရာကို လမ်းလွှဲပေးရန် အသုံးပြုပါသည်။
သွေးခဲကြေဆေးကုထုံး – ၎င်းတွင် ဖြစ်နေသည့် သွေးလွှတ်ကြောဆီသို့ ဆေးထိုးပြီး သွေးခဲကို ချေခြင်းဖြစ်သည်။
Angioplasty – ၎င်းတွင် ပါးလွှာပျော့ပြောင်းသော ပြွန်နှင့် ဘောလုံးကိုသုံးကာ သွေးလွှတ်ကြောကို ချဲ့မည်ဖြစ်သည်။
Endarterectomy – ၎င်းတွင် သွေးလွှတ်ကြောမှ အဆီအနည်များကို ခွဲစိတ်ဖယ်ရှာခြင်းဖြစ်သည်။
Atherectomy – ၎င်းတွင် သွေးလွှတ်ကြောမှ ချပ်ပြားများအား ထိပ်တွင်ဓါးပါသောပြွန်ကိုသုံးကာ ဖယ်ရှားခြင်းဖြစ်သည်။
အဆီအဆိမ့်များကို ရှောင်ပါ။ အသီးအရွက်များများစားပါ။ တစ်ပတ်လျှင်နှစ်ကြိမ် ငါးစားပါ။
ဆေးလိပ်သောက်ပါက ဖြတ်ပါ။ အရက်လျှော့သောက်ပါ။
အဝလွန်နေလျှင်၊ ကိုယ်အလေးချိန်များနေလျှင် ဝိတ်လျှော့ပါ။
သွေးကြောကျဉ်းခြင်းနှင့်တွဲသော သွေးတိုး၊ ကိုလက်စထရောမြင့်ခြင်းနှင့် ဆီးချိုကို ကုသပါ။
သွေးကြောကျဉ်းခြင်း သည် လက္ခဏာပြခဲပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင် တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပိုဆိုးလာပြီး နောက်ဆက်တွဲဝေဒနာတွေ အများကြီး ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သွေးကြောကျဉ်းစေနိုင်တဲ့ အပြုအမူတွေကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ လက္ခဏာတွေ ခံစားနေရရင် စောစောစီးစီး ကုသပါ။
Atherosclerosis. http://www.webmd.com/heart-disease/what-is-atherosclerosis#1 . Accessed November 21, 2016.
Atherosclerosis. http://www.healthline.com/health/atherosclerosis .Accessed November 21, 2016.
Atherosclerosis. https://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/atherosclerosis/atrisk . Accessed November 21, 2016.
နှလုံးသွေးကြောချဲ့ခြင်း (angioplasty) ကုသမှု အကြောင်း သိကောင်းစရာများ